ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट चलाउने जनसंख्या ३ करोडमाथि, जनसंख्याभन्दा धेरै !
आइसिटी समाचार सोमबार, २८ भदौ, २०७८
मुलुकमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट चलाउने जनसंख्या ३ करोड पुगेको छ । फिक्स लाइन र मोबाइल डेटा खपतलाई हिसाब गरेर नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट चलाउनेको संख्या निकालेको हो ।
प्राधिकरणले निकालेको एमआइएस रिपोर्टअनुसार मुलुकमा जनसंख्याभन्दा धेरैले ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको असार महिनासम्म मुलुक ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट चलाउनको संख्या ३ करोड ९ लाख ५४ हजार पुगेका छन् ।
प्राधिकरणको २०७७ असार महिनाको रिपोर्टअनुसार १०२ प्रतिशतमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ ।
त्यसमध्ये मोबाइल ब्रोडव्यान्ड चलाउनेको संख्या २ करोड २९ लाख ८५ हजार रहेका छन् भने फिक्सका चलाउनेको संख्या ७९ लाख ६९ हजार रहेका छ्न । प्राधिकरणले एक ग्राहक बराबर ४.८८ जना व्यक्तिले इन्टरनेट चलाउने मान्यतका आधारमा फिक्स इन्टरनेटका ग्राहक संख्या निकाल्ने गर्छ ।
यस संख्यामा एउटै ग्राहक पनि दुुई तीन सेवा प्रदायकमा जोडिएको हुनसक्छ । जस्तो कि नेपाल टेलिकमको डेटा चलाउनेले एनसेलेको पनि चलाएको हुनसक्छ । त्यस्तै, त्यही व्यक्तिले फिक्सलाइन पनि चलाएको हुनसक्छ । यस कारणले एउटै ग्राहक दुई, तीन ठाउँ दोहोरिन सक्ने भएकाले जनसंख्याभन्दा धेरै ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट चलाउनेको संख्या देखिएको हो ।
मुलुकमा पहिलो पटक सत प्रतिशत जनसंख्यामा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको एमआईएस रिपोर्टअनुसार सत प्रतिशत जनसंख्यामा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पुगेको हो ।
सत प्रतिशतमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पुग्दा ७६ प्रतिशत मोबाइल ब्रोडव्यान्ड पुगेको छ भने २५.६६ प्रतिशतमा फिक्स ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट र ०.७० प्रतिशतमा वायरलेस फिक्स इन्टरनेट पुगेको छ ।
यी दुई प्रविधिका इन्टरनेट विस्तार हेर्दा मोबाइल ब्रोडव्यान्ड तीव्ररुपमा विस्तार भएको छ भने फिक्स इन्टरनेट विस्तार सुस्त रहेको छ ।
एक वर्षमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट विस्तार ७४.३ बाट १०२ प्रतिशत पुग्दै २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
२०७६ असार महिनामा मोबाइल ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट ५५.३० प्रतिशत रहेको थियो । एक वर्षमा मोबाइल ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
फिक्स ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटको एक वर्षमा झन्डै ७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । २०७६ असारमा १८.३५ प्रतिशत रहेको फिक्स ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट गएको असारमा २५ प्रतिशत पुगेको छ ।
वर्ल्डलिङ्कको दशैँ अफर, पुरानै मूल्यमा दोब्बर स्पिडसँगै २० हजार बराबरको उपहार
मोबाइल इन्टरनेट स्पीडमा खस्किँदै नेपाल, फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा भने सुधार
बिहीबार, ७ असोज, २०७८
१५ सय रूपैयाँमा स्मार्ट टेलिकमको ९० जीबी डेटा
इन्टरनेटको शुल्क बढाउने सेवा प्रदायकको निर्णयप्रति क्यान महासंघको ध्यानाकर्षण
मंगलबार, ५ असोज, २०७८
डिशहोमका प्रयोगकर्तालाई मासिक २३३ रूपैयाँमा २५ एमबीपीएसको इन्टरनेट
इन्टरनेटको मूल्य ३०० रूपैयाँसम्म बढाउने आइस्पानको निर्णय
३ जनाले शुरू गरेको ‘गुरूबा’, जसले पढाउँछ निःशुल्क अनलाइन कक्षा
आफ्नो कम्प्युटरबाट अरू कम्प्युटर कसरी एक्सिस गर्ने ?
Tencent: “loophole' allowed WeChat searches on Google, Bing”
Sony Xperia Pro-I with 1-Inch Camera Sensor launched: Specifications, Pricing
Samsung launches three new Galaxy Book laptops with Windows 11
Report: Google Tensor SoC Beats Snapdragon 888, Exynos 2100, Kirin 9000 in GPU Benchmark Tests